Tsamba Inobva Kudare Rinodzora | Kutenda Kwechokwadi
KuHama neHanzvadzi Dzedu Dzinodiwa:
Kutanga nemagazini yaJanuary 1, 2008, Nharireyomurindi yevoruzhinji yakatanga kutibudisira nyaya dzinonakidza dzine musoro unoti, “Tevedzera Kutenda Kwavo.” Kubva ipapo, nyaya idzi dzakaramba dzichibuda pashure pemwedzi mitatu yoga yoga uye dzanga dzichitifadza chaizvo!
Vaverengi vave vachitii nezvenyaya idzi? Mumwe muverengi paakapedza kuverenga nyaya yaMarita akanyora kuti: “Pandakaverenga nyaya yacho ndakaseka nokuti ndinoita sezvaaiita, kazhinji pandinenge ndiine vaeni ndinobatikana chaizvo ndichikanganwa kuti ndinofanira kumbogarawo pasi ndonakidzwa nokukurukura nevamwe.” Mumwe musikana ari kuyaruka akataura mashoko aya anofadza paakaverenga nyaya yaEsteri: “Ndinobvumirana nepfungwa yokuti dzimwe nguva tinogona kunyanya kufunga nezvezvipfeko uye zvinhu zviri mufashoni. Tinofanira kushambidzika zvakanaka asi hatifaniri kunyanyisa.” Akatiwo: “Jehovha ane basa nokuti takaita sei nechomukati.” Nyaya yaitaura nezvemuapostora Petro yakaita kuti imwe hanzvadzi yechiKristu itaure mashoko aya: “Ndakaita sendaiva munyaya yacho pandakaiverenga. Ndakashandisa pfungwa dzangu kuti ndifungidzire zvinhu zvisinganyatsodonongodzwi nendima dzacho.”
Vaverengi ava nevamwe vakawanda vakanyora vachitenda nyaya idzi, vanopupurira zvakanyorwa nemuapostora Pauro karekare kuti: “Zvinhu zvose zvakanyorwa kare zvakanyorerwa kuti tirayiridzwe.” (VaR. 15:4) Chokwadi, Jehovha akaita kuti nyaya idzi dzinyorwe muBhaibheri kuti tiwane zvidzidzo zvinokosha. Tose zvedu tinogona kuwana zvidzidzo panyaya idzi pasinei nokuti tava nemakore mangani taziva chokwadi.
Tinokukurudzirai kuti muverenge bhuku rino nokukurumidza sezvamungagona. Rishandiseiwo paKunamata kwenyu Kwemhuri uye vana vachanakidzwa chaizvo naro! Parichadzidzwa paChidzidzo cheBhaibheri Cheungano, usarovha kana vhiki zvayo! Nyatsoriverenga usingamhanyi. Ita souri munyaya dzacho. Edza kuva nemanzwiro evanhu ivavo vanotaurwa muBhaibheri, uchiita souri kuona zvavaiona. Enzanisa zvavakaita mumamiriro ezvinhu akasiyana-siyana nezvaungadai wakaita.
Tinofara chaizvo kukubudisirai bhuku rino. Dai rikakubatsirai chaizvo imi nemhuri yenyu. Tinokudai chaizvo uye tinokushuvirai zvakanaka.
Tevedzera Kutenda Kwavo​—Tsamba Inobva kuDare Rinodzora